Others (2) - Omyanmar
S-box steel door with 1 shelf and keylock. S-box စတီးတံခါးနှင့်ပုံးဖြစ်သည်။ စင် (၁)စင်ပါဝင်ပြီး သော့ခတ်နိုင်သည်။
S-BOX GLASS DOOR
S-box glass door with 1 shelf and keylock S-box မှန်တံခါးနှင့်ပုံးဖြစ်သည်။ စင် (၁)စင်ပါဝင်ပြီး သော့ခတ်နိုင်သည်။
S-box with 1 shelf S-box စတီးပုံး၊ စင် (၁)စင်ပါဝင်သည်။ Size: W88*D40.7*H44 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၈၈၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၄၄ စင်တီမီတာ
S-BOX2DRAWERS
W88 * D40.7 * H44 cm
OVERHEAD SLDING DOOR
Overhead sliding door cabinet with keylock. အပေါ်တွင်ထားသည့် ဆွဲတံခါးနှင့်ဗီရိုငယ်ဖြစ်ပြီး၊ သော့ခတ်နိုင်သည်။